Cayaaraha - BBC Somali
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 December, 2013, 20:21 GMT 23:21 SGA
Natiijooyinka Horyaalka Ingiriiska
Tartanka horyaalka oo hadda maraya toddobaadkii 12aad waxaa hoggaanka u qabatay Manchester City oo leh 28 dhibcood.
18 Novermber 2012
Natiijooyinkani waxay muujinayaan in kooxuhu isku awood dhow yihiin hase ahaatee waxaa meel sare sii ordaysa kooxda Chelsea oo 22 dhibcood ku hoggaaminaysa horyaalka.
28 Oktoobar 2012
Chelsea waxay maalinta ka xumaysay tababarahoodii Andre Villas-Boas.
20 Oktoobar 2012
Baaritaanka ciiidanka booliiska Yorkshire
Ciidamada booliiska qeybta Yorkshire ee waddankan Britain ayaa dib u furaya baaritaanka qaabkii ay u dhaqmeen booliisku masiibaddii loogu magacdaray Hillsborough ee dhacday sanadkii 1989, oo ay ku dhinteen taageerayaasha kubadda cagta.
Alan Oliveira oo u dhashay waddanka Brazil ayaa noqday mid ka mid ah magacyada cayaartooyda cayaaraha fudud ee 2012 Paralympics kadib markii uu ka adkaaday Oscar Pistorius oo u dhashay Koonfur Afrika cayaartii orodka T44 200m habeenkii Axadda.
Cayaaraha English Premier League
Shaadhka uun baa is beddelaye Robin van Persie waxa uu ahaa ninkii awelba ku xaragoon jirey kubadda cagta markii uu gool la yaable uu u dhaliyey Manchester United iyaga oo ku badiyey 3-2 markii garoon kooda Old Traffod ay kula ciyaareen Fulham sabtidii.
27 Agoosto 2012
Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Aadan Sabriye.
23 Agoosto 2012
Cayaaryahan Eduardo oo horay ugu cayaari jiray kooxda Arsenal ayaa Khalad wayn ku tilmaamay iibinta Van Persie iyo Song oo u wareegay kooxaha Man U iyo Barcelona.
22 Agoosto 2012
Geerida Saamiya YuusufMaqal08:19
Saamiya Yuusuf Cumar oo Soomaaliya u matashay tartankii Beijing Olympics, ayaa dhowaan ku geeriyootay badda iyadoo doonaysa in ay doon ku gasho Talyaaniga.
21 Agoosto 2012
WararkaAfrikaArgagixisoBariga AfrikaBariga DhexeCiyaarahaMaqalSawirroYurubHalkaan ka baar canaawiinta oo dhan A-Z